इलिनोइस होम ग्रोले नियमहरू क्यानाबिस, कसरी इलिनोइसमा कानूनी रूपमा भांग खेती गर्ने
इलिनोइसमा गृह ग्रो क्यानाबिस
इलिनोइसका केही बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको मेडिकल मारिजुआना कार्डको साथ गाँजाको घर बढ्न जनवरी १, २०२० देखि सुरु हुन्छ - यहाँ छ इलिनोइसको होम ग्रो कसरी कार्य गर्दछ।
इलिनोइस मेडिकल मारिजुआना बासिन्दाहरूको लागि होम ग्रो
इलिनाइस क्यानाबिसको घर उगाना उनीहरूको प्राथमिक निवासमा मेडिकल भांगका बिरामीहरूको लागि उपलब्ध छ - पाँचको सीमाको साथ ()) भांगका बोटहरू पाँच ()) इन्च भन्दा अग्लो - प्रति घर र प्रति व्यक्ति होइन।
सुचना दिनुहोस् वा अनुच्छेद १० को समीक्षा हेर्नुहोस् भांगको व्यक्तिगत प्रयोग (घर बढ्न)। इलिनोइस विधानमंडल द्वारा पारित पूर्ण Ill१० पृष्ठ कानूनको लागि लिंक क्लिक गर्नुहोस्
इलिनोइस मेडिकल मारिजुआनाका बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको प्राथमिक निवासको लागि बढ्न घर सम्बन्धी बिलको पाठ तल कानूनमा रहेको भिडियो र लेखको ट्रान्सक्रिप्टको साथ तल छ।
सम्बन्धित पोस्ट: बीजहरू खरीद गर्नुहोस् कानूनी रूपमा अनलाइन
घर उब्जाउ भांग सजिलो हुन सक्छ
वास्तवमा, इलिनोइस राज्यमा औषधीय उद्देश्यका लागि घर उब्जाउने मारिजुआनालाई भर्खरै कानुनीकरण दिएपछि, पहिले भन्दा धेरै उत्पादकहरूले सल्लाहको लागि इन्टरनेटमा हेरेका छन्।
इलिनोइसमा भांग कसरी बढ्ने भन्ने बारे जान्नुमा यस राज्यको अनौंठो आवश्यकताहरू बारे सचेत हुनु - र तपाईंसँग केहि काम गर्ने तरिकाहरू पत्ता लगाउनु हो।
एउटा आवेदन भर्नुहोस् र एक मेडिकल क्यानाबिस कार्ड पाउनुहोस्
दुर्भाग्यवस, केवल सबैले इलिनोइसमा आफ्नै भांग विकास गर्न सक्दैनन्। तपाईंले औषधीय उद्देश्यका लागि भांग प्रयोग गर्ने योजना बनाउनु आवश्यक छ, र तपाईंले मेडिकल क्यानाबिस इजाजतपत्र - वा कार्डको लागि आवेदन दिन आवश्यक छ। इजाजत पत्र प्राप्त गर्नका लागि, तपाइँले आवेदन दिन आवश्यक छ - २०१ 2015 मा प्रशोधन हुनको लागि दश महिना देखि एक वर्ष सम्म लिनको लागि प्रयोग हुने। तथापि, २०२० सम्ममा, तपाइँ इलिनोइसमा तपाइँको मेडिकल क्यानाबिस कार्ड एक दिन वा कम दिनमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
सबै सम्भावित उत्पादकहरूले तिनीहरूको लाइसेन्स प्राप्त गर्दैन, कि त। जे होस्, यो तपाईंले लिनुपर्ने पहिलो (र आवश्यक!) चरण हो।
घर भित्र बढ्ने को फाइदा
इलिनोइस मौसम यस्तो छ कि घर भित्र भांग उब्जाउने व्यापक सिफारिश गरिदैन। तसर्थ, तपाईं सबैभन्दा सफल हुनुहुनेछ भित्री भांग भित्री भित्र।
त्यसो गर्दा त्यहाँ धेरै फाइदाहरू छन्। न केवल तपाईं आफ्नो तापमान, हावा, प्रकाश, र आर्द्रता नियन्त्रण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, तर तपाईंले आफ्ना बोटहरूलाई अझ स्थिर बढ्दो वातावरण प्रदान गर्नुहुनेछ। यसले लामो अवधिमा तपाईंको उत्पादकता बढाउन सक्छ।
तपाइँको वातावरणीय आवश्यकताहरूमा ध्यान दिनुहोस्
यदि तपाईंले विगतमा बगैंचा लगाउनुभएको छ भने, तपाईंलाई सायद थाहा छ केही खास बोटहरू कत्ति फिन्की हुन सक्छन्! भांग फरक छैन। तपाईंले विकासको प्रत्येक चरणको लागि प्रकाश समायोजन गर्न र कम्तिमा .० देखि %०% आर्द्रता प्रदान गर्न आवश्यक छ। तपाईलाई to० देखि degrees 40 डिग्रीको तापक्रम चाहिन्छ (जब बत्तीहरू सकृय हुन्छ) र to 60 देखि degrees० डिग्री (जब बत्तीहरू बन्द हुन्छ)।
तपाईंले भेन्ट, एयरपोर्ट र फिल्टरको साथ आदर्श वायु गुणस्तर पनि कायम राख्न आवश्यक छ, र तपाईंले ओभरटरि avoid पनि बेवास्ता गर्नुपर्नेछ।
सानो सुरू गर्नुहोस्
यदि तपाईं इलिनोइसमा भांग उब्जाउने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न पर्याप्त भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने, सायद तपाईं सुरु गर्न बिटमा चम्प गर्दै हुनुहुन्छ। आफूलाई टाढा नलैनुहोस्।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग उचित उपकरण छ र तपाईंलाई कसरी थालनी थाल्नु अघि जान्नुहोस्। त्यहाँ सबै प्रकारका सामग्रीहरू छन् जुन तपाईंलाई लगानी गर्नु आवश्यक पर्दछ, र राम्रो गुणस्तर तपाईं खर्च गर्न सक्नुहुनेछ, त्यति नै राम्रो तरीकाले तपाईं पछि हुनुहुनेछ।
धेरै आधारभूत स्तरमा, तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ:
एक बढ्ने कोठा वा बढ्ने बक्स
सहि बीउहरू पाउनुहोस्
माथि उल्लेखित उपकरणहरू बाहेक, तपाईंले सही बीजहरूमा लगानी पनि गर्न आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईं औषधीय उद्देश्यका लागि मारिजुआना बढ्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं क्यानबिनोइड्सको सबैभन्दा ठूलो मात्राको साथ एक स्ट्रान छनौट गर्न चाहानुहुन्छ। अन्यथा, उत्तम प्रकारको भांग फरक हुन्छ, तर विकल्पहरूमा सेटिवा, ईन्डिका, र संकरहरू सामेल छन्।
उत्पादकको समयरेखा मास्टर गर्नुहोस्
एकचोटि तपाईंसँग तपाईंको सबै उपकरणहरू भएपछि, तपाईंले आफैलाई गाँजा बढाउने सबै चरणहरूसँग परिचित गर्नु पर्छ। अवश्य पनि, तपाइँले तपाइँको बीउ रोप्नु हुन्छ र तिनीहरूलाई अंकुरणको प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ, तर त्यसपछि तपाइँले केही धैर्य धारण गर्नुपर्नेछ जब तपाइँको बिरुवा बिरुवा, वनस्पति, फूल फुल्ने, र अन्त्यमा - फसल काट्ने र उपचार चरणहरू मार्फत हुनेछ।
धैर्य गर्नुहोस्, यद्यपि, र तपाईंको कडा परिश्रमको परिणाम हुनेछ। इलिनोइसमा भांग कसरी बढाउने भन्ने कुरा सिक्नु भनेको व्यक्तिगत तवरमा इनामदायी र समृद्ध मात्र होइन तर तपाईंको लागि अत्यधिक लाभदायक पनि हुन सक्छ।
इलिनोइस होम ग्रो मूर्ति व्यक्तिगत प्रयोगको लागि सीआरटीए को अनुच्छेद १० हो
तल आईएल कानून पढ्नुहोस्: सीआरटीए को धारा १०
इलिनोइस होमग्रीउन मारिजुआना भिडियो
(यो माथिको भिडियो र पोडकास्टको ट्रान्सक्रिप्ट हो।)
ओह, शुभ प्रभात सबैलाई। मैले सोचें कि यो एक राम्रो विचार हुन सक्छ माइक्रोफोनको नजीक हुन सक्छ। तर यहाँ आउनुहोस् र स्प्रिfield्गफील्ड, इलिनोइस मा हिजो रात के भयो मा जानुहोस्। तपाई हेर्नुहोस्, इलिनोइसले वास्तवमा मारिजुआनालाई वैध बनायो। अब, जब म भन्छु इलिनोइसले मारिजुआनालाई वैध बनायो, म अनुमान गर्छु कि मैले यो योग्य बनाउनु पर्छ। इलिनोइसका सिनेटले मतदान गरे र मारिजुआनाको वैधानिकता पारित गरे। र इलिनोइस मारिजुआना वैधानिकता HB1438 थियो। र केहि मानिसहरूले सोधे,
"किन HB1438 र SB007 होइन?"
त्यसैले म मेरो स्क्रीन साँच्चै साझेदारी गर्न गइरहेको छु, वास्तवमै द्रुत। र त्यसपछि तपाईं यी देख्न सक्षम हुनुहुनेछ, बिल।
त्यसोभए यदि तपाईं क्यानबिस वकिल गुगल गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईं मलाई कसरी फेला पार्न सक्नुहुन्छ। मेरो नामको टम होवार्ड। मँ ... यो मेरो वेबसाइट हो भांग उद्योग वकील। हाल केवल शिकागो ठेगाना त्यहाँ छ। मसँग एउटा समस्या छ ... गुगल मेरो व्यापारको साथ। तर तपाईंलाई थाहा छ त्यो कसरी छ।
जे भए पनि, यो बिलको प्रतिलिपि हो। र यदि मैले नियन्त्रण फेला पछाडि हिर्काएँ भने तपाईंले देख्नुहुनेछ कि म निवासीको लागि खोजी गर्दै थिएँ। मलाई निवासीको खोजीको कारण ... र म विश्वास गर्दछु यदि तपाईं यहाँ यस डोमेनमा कन्ट्रोल एफ गर्नुहुन्छ भने ... र यो डोमेन, चिन्ता नलिनुहोस्, म यो भिडियोको विवरणमा यसलाई ड्रप गर्नेछु एक पटक काम सकिसके पछि। तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि इलिनोइस सीनेट हिजो के पारित भयो। र केही व्यक्तिहरू भन्दैछन्, "कुनै घर बढ्दैन?" वास्तवमा त्यहि हो जुन मैले तपाईंलाई देखाउँदै थिए।
र यदि तपाईं जानुहुन्छ र तपाईं एसबी खोजी गर्नुहुन्छ ... होइन यो एसबी होईन। यो HB१1438 हो जुन हिजो इलिनोइस सिनेटले पारित गरेको हो, resident9औं शव्द निवासी मध्येबाट 38th औँले तपाईंलाई इलिनोइसको वयस्क प्रयोग घर बढ्न दिनेछ। र त्यहाँ अझै बढ्न घर छ। यद्यपि, तिनीहरूले विशिष्ट सीमितताहरू परिचय गरे। Tउसले पहिले एक बिहान कफीको एक घूटो लिईरहेको छ। हे भगवान। इलिनोइस र विशेष गरी पियोरिया, इलिनोइस ताजा रोस्ट कफिको लागि साँच्चिकै राम्रो छ। मलाई थाहा छैन म अरू कतै जान सक्दिन.
त्यसोभए घर बढ्न अझै बाँकी छ। यद्यपि उनीहरूले यो निश्चित गरे कि यो कोही हुदैछ, यो इलिनोइसका बासिन्दासम्म सीमित छ, २१ बर्ष वा माथि उमेर जो मेडिकल भांगको पायलट प्रोग्रामको अनुकम्पा प्रयोग अन्तर्गत एक योग्य बिरामी हो। ती पाँचवटा बोटको सीमा बिना खेती गर्न सक्छन् जुन प्रत्येक घरपरिवार पाँच इन्च भन्दा बढी अग्लो हुन्छ। एक खेती केन्द्र वा शिल्प उत्पादक इजाजत बिना। र त्यसपछि यस खण्डमा, निवासी, मतलब एक व्यक्ति जो खेती अघि .० दिनको अवधिको लागि इलिनोइस राज्यमा बसोबास गरिएको छ।
इलिनोइस घर बढ्न भांग
त्यसोभए मानिसहरूले तपाईलाई भनेको छ कि इलिनोइस कानुनीकरणको वयस्कमा कुनै घर बढेको छैन। आंशिक क्रेडिट, त्यहाँ मेडिकल मारिजुआना बिरामीहरू छैनन् जो मान्छे को लागी घर छैन। यदि तपाईं इलिनोइसमा मेडिकल मारिजुआना बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईंसँग अझै घर बढ्ने छ। यसको मतलब के हो जब मँ भन्छु ... ठीक छ यो एक सानो भ्रमपूर्ण छ। मैले भने इलिनोइसले वैधानिक मारिजुआना जुन प्राविधिक रूपमा सत्य हो। यो इलिनोइसले पहिलो पटक राज्यको स्तरमा मारिजुआनालाई कानुनी मान्यता दिन मतदान गरेको हो। यो केवल नेब्रास्का बाहेक, द्विपदहरू मात्र हो भनेर अवस्थित छ। र यसरी सिनेट पारित भयो। तर त्यो अनौठो हो किनभने सेनेट बिल SB007 हो। तर त्यो उनीहरूले पारित गरेको बिल होइन। यसको सट्टा तिनीहरू HB1438 पास गर्छन्। र HB1438 अवश्य हाउस बिल हो। र त्यसोभए हाउस बिल नै हाम्रो परिचयमा परेको थियो ... र त्यसपछि क्यासिडिले हाउसमा परिवर्तन गरे जुन घरका लागि योग्य हुनको लागि मात्र यी मेडिकल मारिजुआना बिरामी हुने हुन जान्छन्। अर्को कुरा जुन म पछि जाँदैछु जाँदै छु फेरि पछाडि स्क्रिन साझा गर्न को लागी यहाँ वास्तविक छिटो। म केवल तपाईंलाई मात्र साझेदारी गर्न गइरहेको छु… त्यसैले जानुहोस्, फेरि यो त्यहाँ छ, पृष्ठ 40० इलिनोइस मेडको…
अवधि २०२० 2020२ पटक इलिनोइस वयस्क प्रयोग क्यानाबिस कानूनमा देखा पर्दछ
खैर यो मेडिकल मारिजुआना हैन, यो अब वयस्क मारिजुआना प्रयोग गर्दछ। त्यहाँ जहाँ तपाईं एक मेडिकल बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईंको घर बढेको पाउन सक्नुहुन्छ। तर २०२० सालको कुरा गरौं। त्यो ... २०२० को हुनुपर्छ। किन मेरो किबोर्ड प्रतिक्रिया दिइरहेको छैन? ठीक छ, त्यो प्रतिक्रिया छ। नियन्त्रण खोज्नुहोस् ... ठीक छ अब यो काम गर्दैछ। साना टेक्निकल मुद्दाहरू सधैं हुन्छन्। त्यसो भए २०२० शब्द खोजौं। र २०२० शब्द यस कानूनमा times२ पटक देखा पर्नेछ। हामी किन २०२० शब्द खोज्दैछौं? किनकि यदि यो पारित भयो भने हामी इलिनोइसको इतिहासमा रोचक समयमा जान्छौं जहाँ वयस्कहरूको उपयोगका मारिजुआनाका विशेष प्रकारका इजाजतपत्रहरूको लागि धेरै अनुप्रयोगहरू २०२० मा अनलाइन आउँदछन्। कमसेकम त्यो अनुप्रयोगहरूको कारणले गर्दा हुन्छ। । पहिलो रातो चिठी मिति २०२० को मे हुन लाग्दछ। तर वास्तवमा हामी पहिलो पहिलो पत्र मितिबाट सुरु गरौं, जनवरी २०२० को जनवरी १। २०२० जनवरी १ तारिख त्यो मिति हुनेछ जुन तपाईं वास्तविक रूपमा जान सक्नुहुन्छ र वयस्कको प्रयोग मारिजुआना किन्न सक्नुहुन्छ। यो मिति पनि हुनसक्दछ जुन यसको प्रभावकारी मिति हो।
अब हिजो हामी कार्यक्रममा मसँग गाँजा कानूनीकरण सम्बन्धी समाचारको बारेमा कुरा गर्दै थियौं। हामीसँग सामेल हुनको लागि अब सदस्यता लिनुहोस्। प्रत्येक बुधवार दिउँसो २ बजे हामी हप्ताको लागि क्यानाबिस कानूनीकरण समाचारमा जान्छौं। र त्यसपछि तिनीहरूसँग प्राय जसो हामीसँग त्यो प्रसारण बन्द हुने बित्तिकै केहि धेरै ठूला भांग कानुनीकरण समाचारहरू छन्। इलिनोइस सीनेट पास मारिजुआना। माफ गर्नुहोस्। मसँग कसैसँग फ्याँक्नको लागि त्यस्तो समय छैन। त्यसोभए जनवरी २०२० को जनवरी तपाईसँग मारिजुआना वैधानिक हुनेछ र यो किन्न कानुनी हुनुपर्दछ। तर सबैबाट किन्नु कानूनी हुनेछैन। यसको सट्टा यो केवल प्रारम्भिक स्वीकृति वयस्क प्रयोग औषधालय संगठनहरूबाट खरीद गर्न कानूनी हुनेछ। त्यसैले म यहाँ छु। त्यसैले यी मूल रूपले मेडिकल मारिजुआना कम्पनीहरू हुन जाँदैछन् दादाको लागि। र ती ती हुन् जुन कि २०२० को पहिलो मितिमा खरीददारहरूलाई भांग बिक्री गर्न सुरु गर्न सक्नेछन्।
अवश्य हो, त्यो समय २०२० 2020२ पटक देखा पर्दछ। र म हेर्दै छुइन ... यो त्यहाँ छ। यहाँ हामी जान्छौं, हामी यहाँ जान्छौं। यहीँ मैले खोजिरहेको थिएँ। यो १ मे २०२० अन्तिम म्याद, जनवरी १, २०२१ भन्दा अघि सशर्त वयस्क प्रयोग औषधालय संगठनको इजाजतपत्र प्रदान गर्ने। विभागहरू, कोर्सको विभाग भनेको कृषि विभागले १ 32, २०२० भन्दा पहिले 1 2020 वटा वयस्कको प्रयोग संगठनात्मक इजाजत पत्र जारी गर्नुपर्नेछ। र त्यसपछि उनीहरूले वयस्कको प्रयोग अनुप्रयोग बनाउँनेछन्, हो, एप्लिकेसन अक्टुबर १, २०१ 1 सम्म हुनेछैन। हुनसक्छ तपाईहरू, तपाईलाई सम्भवतः यो मेरो बारेमा थाहा छ। म धेरै हेम्प कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछु। र हेम्प आवेदन यस बर्षको अप्रिल th० सम्म सार्वजनिक गरिएको थिएन। यो सहि छ, एक महिना अघि आज देखि। र त्यस समयमा मेरो फोन विस्फोट भयो र म धेरै मानिसहरूलाई मद्दत गर्दैछु।
तर अब हामीसँग धेरै त्यस्तै चीज हुनेछौं। जहाँ धेरै व्यक्तिहरू ती 75 1 लाइसेन्समध्ये एउटा चाहान्छन्। र तिनीहरू २० 2020st१ जे मे १ before भन्दा पहिले ती इजाजतपत्रहरू मध्ये कुनै एकको लागि आवेदन दिन चाहन्छन्। तर यो हेम्प लाइसेन्स जत्तिकै सजिलो हुँदैन जुन धेरै प्रयोगकर्ता मैत्री र प्राप्त गर्न को लागी उत्तम छ। जेफ कोक्स र इलिनोइस कृषि विभागमा तल मेडिकल प्लान्ट्स विभागले त्यो आवेदनमा ठूलो काम गर्‍यो। तर तपाईंसँग लामो विन्डो छ। किन यो हुने भइरहेको छ अनुप्रयोगहरू अक्टुबर १ सम्म उपलब्ध हुँदैन र ती २० जनवरी पछि स्वीकार गरिने छैन? र त्यसोभए तपाईले ती अनुप्रयोगहरू मे १ सम्म पठाउँदै हुनुहुन्न। त्यसोभए त्यसबारे सोच्नुहोस्। अक्टुबर १, जनवरी १, मे १… दक्षिण क्यारोलिनाबाट फोन कल। आज मलाई कल गर्ने पहिलो ग्राहक नहुन सक्छ।
त्यसोभए तपाईको जनवरी १, २११ मा जब तपाईको अनुप्रयोगहरू आउँदछन्। अक्टुबर १, २०१ until सम्ममा तपाईले अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहुन्न। र 1 2021 हुने छैन। त्यहाँ more 1 भन्दा धेरै हुनुपर्दछ। उनीहरू त्यस ढोकामा आफ्नो खुट्टा राख्न कोशिस गर्दैछन्। तर त्यसोभए तिनीहरू घोषणा गर्न गइरहेका छैनन् कि कसले तिनीहरूलाई पाँच महिना को लागि जीत गर्छ। र यी अनुप्रयोगहरूका प्रकारहरू छन् जुन स्कोरिoring हुन गइरहेको छ। र एप्लिकेसनहरू ठूलो हुनेछन् किनभने तपाईं यी टीमहरूलाई सँगै राख्नुपर्नेछ यी यी सबै बक्सहरू जाँच गर्न जुन यी अनुप्रयोगहरूमा आउँनेछ। त्यसोभए तपाईले बुझ्नुहुन्छ, यदि तपाईं २०० सम्म पुग्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ र यसमा २१२ पोइन्टहरू हुन सक्छन्। हामी अहिल्यै एक भिडियो गर्न गइरहेका छैनौं किनकि मैले लगभग in in मा बैठक गर्दै छु जुन मैले प्राप्त गर्नुपर्दछ।
र यसैले हामी समयको बारेमा थोरै कुरा गर्न सक्छौं र त्यो घर बढ्ने अझै मेडिकल मारिजुआना बिरामीहरूको लागि छ। स्क्रिन सेयरमा फर्कनुहोस् र तपाईंले केहि अन्य रोचक रातो मितिहरू देख्नुहुनेछ। त्यसैले यो एक, [सामूहिक 00:08:58] वयस्क प्रयोग संगठन इजाजत पत्र धारकहरूको भौगोलिक फैलाव बीमा गर्न। निम्न BLS क्षेत्र मा ब्लाह, ब्लाह, ब्लाह को रूप मा इजाजत पत्र को संख्या तल पुरस्कृत हुनेछ। र म वास्तवमा यहाँ पियोरियामा बस्छु, हामी तीन जाँदै छौं। त्यो राम्रो freakin राम्रो छ। सेन्ट लुइस क्षेत्र चार प्राप्त हुनेछ, शिकागो को पाठ्यक्रम को 47 हुन्छ। र यो एकदम विरल छ। मेरो मतलब इलिनोइसमा त्यहाँ अझ धेरै चीजहरू छन् ... मेरो मतलब रक टापुको मात्र एउटा ठूलो आवाज निकाल्ने हो। तर पियोरियाको तीन भइरहेको छ। हो, त्यसो गर्न तरिका [जेहान ० :00: २।]। राम्रो।
र यस्तै अन्य, त्यहाँ जनवरी २१ औं खेती छ। हेरौं, विभाग आठ ... ओह मलाई पक्का पनि थाहा छैन कि त्यो के हो। कार्यक्रम इजाजत पत्र समुदाय कलेज क्यानाबिस व्यावसायिक पायलट प्रोग्राम। ओह त्यो साँच्चिकै राम्रो छ। त्यो त्यस्तो कुरा हो जुन मलाई थाँहा पनि थिएन ... मलाई थाहा पनि थिएन कि त्यहाँ थियो। अनुच्छेद २,, क्यानाबिस कलेज, क्यानाबिस व्यावसायिक पायलट प्रोग्राम। यो सहि इलिनोइस हो, कम्युनिटी कलेज र भांगमा प्रमुख। सायद साईन अप गर्न सक्छु। त्यस बारेमा कुरा यो हो दुई अलग बिलहरू। SB21 को विधेयक जुन सिनेटले पारित गरेन, त्यसको सट्टा सीनेटले HB25 पारित गर्यो जसरी सदनमा पेश गरियो। त्यो बिल 007 पृष्ठ लामो छ। त्यसोभए ... त्यहाँ सामुदायिक कलेज क्यानाबिस व्यावसायिक पायलट प्रोग्राम रहेको त्यहाँ कोही पनि कुरा गरिरहेको छैन। त्यो मलाई धेरै आश्चर्य छैन। तर यस्तो इलिनोइस आउने जस्तो देखिन्छ, भांगमा प्रमुख। यो धेरै राम्रो छ।
र म यसको लागि दु: खी छु। मैले भर्खरै यी सबै २०२० देखाउँथें। त्यहाँ उनमा 2020 छन्। र अब म यसको लागि जूम गर्न लागिरहेको छु र हामी इलिनोइस वयस्क प्रयोग कानुनीकरणको सबैभन्दा रोमान्चक पक्ष के हुन सक्छ भनेर सिनेटले हिजो पारित गरेको बारेमा चाँडै कुरा गर्ने छौं। र आशा छ कि हामी के कुरा गर्नेछौं एक आदर्श मामला के हुनेछ। र मलाई थाहा छैन कि यो कहिले हुनेवाला छ। हामी वास्तविक चाँडै यसको बारेमा कुरा गर्नेछौं। तर cra० शिल्प २०२० को जुलाई १ मा इजाजतपत्र बृद्धि गर्दछ। र त्यसपछि तिनीहरू २०२१ को डिसेम्बर २१ सम्म बेच्न सक्दैनन्। र त्यसपछि २०२१ को डिसेम्बर २१ सम्म उनीहरू [सुन्न नसकिने 32:40:1] अरु cra० शिल्पमा बढ्ने इजाजतपत्रहरू पाउँछन्। त्यसोभए त्यहाँ कम्तिमा १०० हुनेछ, १०० अहिलेका लागि, शिल्प बढाउने इजाजतपत्रहरू आउँदैछ। र त्यहाँ त्यहाँ क्राफ्ट बढ्ने इजाजतपत्रहरूमा प्रतिबन्धहरू छन्। र म गइरहेको छु ... र त्यसपछि यहाँ अर्को एक छ। र त्यो कुनै समय शिल्प उत्पादक इजाजतपत्र १ 2020० र अन्य प्रतिबन्ध भन्दा बढी छ। र त्यसपछि यहाँ अनुप्रयोग सामानहरू छन् जुन हामी पनि जान्छौं।
शिल्प उत्पादकहरू यस अर्थमा चाखलाग्दो छन् कि त्यो त्यस्तो तरीका हुन गइरहेको छ कि मानिसहरू क्यानाबिस अन्तरिक्षमा फिर्ता जान सक्छन्। र त्यहाँ सबै सीमितताहरू छन् जो र के यी सबैको स्वामित्व हुन सक्छ। त्यहाँ त्यहाँ लग जाम को एक धेरै हुन गइरहेको छ शिस्त बढ्दै को लागी, वितरण को लागी। र त्यस पछि ती खेलमा खेल्दा, इलिनोइसिस ​​रोकिन्छ ... किनकि जस्तो, तपाई बढ्दै जानुहुन्छ, तपाई प्रशोधन गर्नुहुन्छ, तपाई प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। सही? भाँडो कसले चलाउँदैछ? यो एक नयाँ इजाजतपत्र हुन गइरहेको छ जुन आउँदैछ, यातायात। त्यसो भएपछि यी मितिहरू मध्ये एक, त्यहाँ रातो पत्र मितिहरू मध्ये एक हो, तपाईं एक फरक प्रकारको इजाजतपत्र प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। र औषधालय र खेती केन्द्र र प्रोसेसरले भांग ढुवानी गर्न सक्षम हुने छैन। तिनीहरूले यसलाई ट्रान्सपोर्टरमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ जुन भांगको ढुवानी गर्न लाइसेन्स प्राप्त छ। त्यसैले म यसलाई समेट्ने छु किनकि एलर्जीले मलाई मार्दैछ।
जस्तो कि तपाईंलाई थाहा छैन, इलिनोइस पीडित छ, साथै पूरै देशले दुःख पाइरहेको नै हो १ 1927 २31 को महाप्रलय पछि सबैभन्दा डरलाग्दो बाढी जस्तो पनि हुन सक्छ। वा जे पनि हेक उनीहरूले खबरमा भने। मकै वास्तवमै खेतमा छैन। फिल्डहरू मूल रूपमा मार्स छन्। तपाईले चामल उब्जाउनुहुन्छ होला। त्यो ... हामीसँग इलिनोइसमा चामल धानको पानी पानी जस्तै छ। र मलाई लाग्छ कि वास्तवमा यो हेम्प क्रपलाई एकदम थोरै सेट गर्‍यो। कसलाई परवाह छ? हिजो, इलिनोइस सीनेटले मारिजुआनालाई वैधानिक बनाउन मतदान गरे। आशा छ कि अब के हुन्छ, किनकि इलिनोइस विधायिका शुक्रवार, भोलि, मे st१ लाई स्थगित हुन्छ। आज सदनले यसको आफ्नै बिल HB1438 पारित गर्दछ। भोली जेबी प्रिट्जरले यसलाई कानूनमा हस्ताक्षर गर्नेछ। तर शायद त्यो धेरै छिटो छ। हुनसक्छ उनीहरूलाई समय चाहिन्छ, तपाईंलाई थाहा छ, यस प्रकारको हेडलाइन्सहरूको शोषण गर्नुहोस्। र त्यो एक महिना उसको लागि अद्भुत हुनेछ जुन मेको पहिलो सप्ताहन्तमा बाहिर आउँछ र त्यसपछि यो प्रेस सम्मेलन आयोजना गर्दछ। जहाँ उनले ती नौ पृष्ठहरू उत्पादन गरे जुन मैले एउटा पृष्ठ सिर्जना गरेको थिए। र यो पनि एक पृष्ठ हुनेछ। तर यो एक इलिनोइस मा वयस्क को उपयोग मारिजुआना को लागी घर बढ मा ध्यान केन्द्रित गर्न एक काटिएको पृष्ठ हुनेछ। र त्यसपछि केहि अन्य सहायक मामिलाहरू।
यी सबै 610 १०० पृष्ठहरू, जुन यो पारित हुन्छ, मेरो सामग्री सिर्जना गर्ने कार्यलाई केहि सजिलो बनाउँदछ। तर केहि बढी डरलाग्दो। किनकि मैले यो सामग्री बनाएको रूपमा तपाईं इन्टरनेटमा र्याक गर्नुहुन्छ र मानिसहरूले तपाईंलाई कल गर्छन्। र त्यसपछि व्यक्तिहरू यी अनुप्रयोगहरू सँगै राख्न मद्दत गर्न चाहन्छन्। र अवश्य पनि तपाईं त्यसका लागि जहाजमा हुनुहुन्छ। र त्यसपछि यो धेरै छ ... यो गइरहेको छ ... म एक वर्षमा खैरो हुन सक्छ। हामी विचार गर्ने छौँ। आशा छ कि म सुत्न सक्छु त्यसैले भोली, आशा छ कि तिनीहरूले आफ्नै बिल पारित गरे र त्यसपछि जेबी प्रिट्जरले एक ठूलो प्रेस सम्मेलन गरे। सबै जना भन्छन् के यो एउटा अद्भुत कुरा हो जुन इलिनोइस राज्यको लागि जानेछ। र यो हुनेछ। र त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं। जे होस्, मलाई थाहा छैन कि त्यो आज हुन्छ। यसले मलाई चकित पार्दैन। यदि इलिनिस मारिजुआना वैधानिक गर्न पहिलो विधायिकी राज्य बने भने त्यो आश्चर्यजनक छ। र त्यसो गर्न उनीहरूलाई राष्ट्रपति, राज्यपाल र राज्य व्यवस्थापिकाको दुबै सदनको आवश्यक पर्दैन। र त्यसपछि उनीहरूलाई अझै चाहिएको थियो ... र म मात्र गर्न सक्छु ...
यसलाई समाप्त गर्न म इलिनोइस वयस्क प्रयोग बिलको अन्त्य साझा गर्नेछु। यो विविध लेख with 999 with बाट समाप्त हुन्छ। म विश्वास गर्दछु कि यो एउटा [हर्मन केन 00:15:21] द्वारा तैयार गरिएको थियो। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यो 610१० पृष्ठ लामो छ। कुनै त्वरण वा ढिलाइ छैन। ओह gosh। हो किनभने तिनीहरूले सम्भवतः त्यो… ठीक छ। अब भारतमा मेरो कोडरलाई केहि आवश्यक छ। ठीक छ, ठीक छ कि यो कस्तो प्रकारको छ यो मेरो भइरहेको छ। तपाईले केहि समय पाउनुहुन्छ र त्यसपछि व्यक्तिले सामानहरू चाहान्छन्। ठिकै छ, म अफिसमा पुगें। म भित्र कोही आउँदैछु।
10100HB1438sam002 - --० - LRB101 04919 RLC 61359 a
युरोपेली अदालतको न्याय सीबीडी मादक मादक पदार्थ होईन
by Ivette | नोभेम्बर 20, 2020 | यूरोप मा सीबीडी, फ्रान्समा CBD, EU Hemp Laws, असंगठित
युरोपियन न्याय अदालतले सीबीडीलाई नार्कोटिक होइन युरोपियन न्यायलयको नियमहरू सीबीडी एक मादक पदार्थ होइन, फ्रान्स र सम्पूर्ण युरोपभरि सीबीडी नियमहरुमा सुधारको लागि नयाँ विन्डो खोल्छ र अन्य राष्ट्रिय नियामकहरुलाई विद्यमान प्रतिबन्धहरुको पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्छ ...